29-को बैठकमा भाग लिन जनताको अनुमति रहेको पोष्टरः पोष्टर कसले टाँस्न लगायो? चुलियो सहस्य र शङ्का - खबरम्यागजिन
HomeBreaking News29-को बैठकमा भाग लिन जनताको अनुमति रहेको पोष्टरः पोष्टर कसले टाँस्न लगायो? चुलियो सहस्य र शङ्का
29-को बैठकमा भाग लिन जनताको अनुमति रहेको पोष्टरः पोष्टर कसले टाँस्न लगायो? चुलियो सहस्य र शङ्का
August 25, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङः जनताले दार्जीलिङ पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरुलाई 29 अगस्तको बैठकमा भाग लिने अनुमति दिए। यदि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीद्वारा डाकिएको बैठकमा पहाड़का राजनैतिक दलहरुले भाग लिए जनतालाई कुनै आपत्ति हुनेछैन। तर मुख्यमन्त्रीसित हुने बैठकमा छैटौं अनुसूची, राज्यभित्र राज्य अनि विकासको मुद्दामा सम्झौता भए, त्यसलाई जनताले कठोर विरोध जनाउने भएका छन्।
29 अगस्तको दिन राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाड़का सबै राजनैतिक दललाई वार्तामा बोलाएको, यसको लागि गोरामुमोले पहल शुरू गरेको अनि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि राज्यलाई वार्ता शुरू गर्ने अपील गर्दै पत्राचार गरेको विषयहरु सार्वजनिक भएपछि दार्जीलिङमा यस्तो पोस्टर देखा परेको छ।
जसमा भनिएको छ-29 अगस्तको दिन हुन गइरहेको वार्तामा यदि राज्यभित्र राज्य, विकास, छैटौं अनुसूची वा बङ्गालभित्रकै व्यवस्था जस्ता ललिपपहरुमा सम्झौता हुन गए आन्दोलन अझै तीव्र भएर जानेछ। भावी सन्तानको लागि अझै केही कष्ट सहनैपर्छ, नत्र फेरि पुस्तौं पुस्ता बङ्गालको दास बनेर बस्नुपर्नेछ। यसैले जीएमसीसीले निर्धक्कसँग जनआन्दोलनको त्याग र महत्वलाई बुझेर वार्ता गर्नुहोस्, जनशक्ति तपाईको साथमा छ।
यसबाट दार्जीलिङका जनताले जीएमसीसीलाई 29 अगस्तको वार्ताको भाग लिन यो पोस्टरमार्फत अनुमति दिएका छन्। तर यसबारे जीएमसीसी वा पार्टीगतरूपमा निर्णय लिइने हो, त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। यसैबीच, क्रामाकपा (क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी)-ले पनि 29 अगस्तको बैठकमा भाग लिने पार्टीहरुले एकमात्र गोर्खाल्यान्डको मुद्दमा कुरा गर्नुपर्ने अनि कुरा नमिले वार्ता बहिष्कार गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
स्मरण गराइन्छ, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको क्रममा दार्जीलिङमा भइरहेको दैनिक जुलूस अनि जनसभामा गोजमुमो र क्रामाकपाले एकसाथ सहभागिता जनाइरहेका छन्। आज पनि गोजमुमो र क्रामाकपाले संयुक्त जुलूस निकालेर चौकबजारमा जनसभाको आयोजना गरेका थिए। यसै जनसभालाई सम्बोधन गर्दै क्रामाकपा नेता छिरीङ डुक्पाले यसपालीको आन्दोलनमा पनि क्रामाकपालाई धोका हुन लागिरहेको अनुभव भएको बताए।
उनले गोजमुमोको नाम नलिई भने-अहिले नेताहरु थाकेको जस्तो लाग्दैछ। गोर्खाल्यान्डको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिने शहीदहरुको लागि आर्थिक क्षतिपूर्तिको माग गर्न थालिएको छ। के यी शहीदहरुले राज्य सरकारबाट पैसा थाप्नको लागिनै आफ्नो जीवन बलिदान दिएका हुन्? यदि नेताले गद्दार गर्छ भने जनताले छोड़्नु हुँदैन। यसको जवाबले जनताले दिनुपर्छ।
क्रामाकपा नेता अशोक गजमेरले पनि गोजमुमोमाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै भने-क्रामाकपा गोर्खाल्यान्डको लागि कटिवद्ध छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनकै लागि क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राईले सांसदको पदलाई पनि लात हानिसकेका छन्। गोर्खाल्यान्डकै लागि क्रामाकपाले धेरै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको छ र यसैको लागि गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टीलाई साथ दिंदै आइरहेको छ। तर क्रामाकपाले प्रत्येकपल्टनै धोका पाएको छ र यसपाली पनि अन्य पार्टी नेतृत्वको नीति हेर्दा फेरि धोका हुने आशङ्का बढिरहेको छ। तर क्रामाकपाले धोका पाए, पहाड़का जनतालेनै धोका पाउनेछन्, यसैले जनता सचेत बनेर अघि बढ्नुपर्छ अनि नेतृत्व परिवर्तन गरेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अघि बढाउन परे पनि हिच्किचाउन हुँदैन, अशोक गजमेरले जनतालाई अपील गरे।
यता धेरै जना बङ्गाल पुलिसकै गोलीले शहिद भइसकेको बेला, बन्द 72 दिन पुगिसक्दा, इन्टनेट र मिडियामा रोक्का लगाइएको बेला, जनता सडकमानै रहेको बेला आन्दोलनको निम्ति बलियो रणनीति बनाएर केन्द्र र राज्य सरकारलाई हल्लाउने आन्दोलन तयार पार्नको साटो ममता व्यानर्जीसित झुक्न, शान्ति बहाली र विकासको लागि बैठक बोलाएको जान्दाजान्दै बैठकमा गोर्खाल्याण्डको कुरा हुनुपर्छ भन्ने जनताको नाममा वार्तामा जाने अनुमति रहेको पोष्टर कसले टाँस्न लगाएको हो, त्यसमा विभिन्न शङ्का शुरु भएको छ।
पोष्टर जनताको नाममा टाँसिए पनि बङ्गालसित मिलेर आन्तरिक कुटनीति गरिरहेका दलहरूको हिडन एजेन्डालाई अघि बढाउन यस्तो पोष्टर टाँसेर माहौल बनाउने कुटनीति गरेको हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ।
गोरामुमो र गोजमुमो वार्तामा बस्न चाहान्छ, तर अहिले यसको व्यापक विरोध चलिरहेको छ। यसै विरोधको कारण नै वातावरण बनाउन जनताको नाममा यस्तो पोष्टर टाँसेर आफ्नो लागि बाटो बनाउन कुनै दलले चलखेल गरेको हुन सक्ने शङ्का पनि व्यापक बनेको छ।
दिल्लीको जीएसएसएसले वार्ताको विरोध गरेको छ। आन्दोलन दार्जीलिङ केन्द्रित गरेकोले नै ममतासित वार्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नु नेतृत्वको असक्षमता रहेको जीएसएसएसले बताएको छ।
‘वार्तामा जानुको साटो बलियो रणनीति बनाएर मुद्दालाई राष्ट्रीय बनाइनुपर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ,’ जीएसएसएसका अध्यक्ष किरण बिकेले भनेका छन्, ‘यदि त्यसो नगरिए नेतृत्व फेरि जनतालाई धोका दिने कुटनीतिमा रहेको प्रमाणित हुनेछ।’
पेदोङ युवा मोर्चा सचिव पाल्देन भोटिया पक्राउ
दुइ भङ्गालोमा आन्दोलनः कुन छान्ने?